Akavhura murume wake dumbu | Kwayedza
Akavhura murume wake dumbu
14 Nov, 2019 - 15:11	 2019-11-14T15:40:59+00:00 2019-11-14T15:40:59+00:00 0 Views
MUDZIMAI wemubhuku rekwaTama kwaMambo Chamutsa, kuBirchenough, anonzi akazvambaradza murume wake apo akapwanyira bhodhoro redoro mumusoro make, ndokubva amucheka-cheka dumbu nemagirazi kusvika abuda ura achimupomera kuti ari kupedzera mari kuhwahwa.
Izvi zvakaitika parimwe bhawa reko.
Lucia Ndlovu (28) ari kupomerwa kurova murume wake Desire Mlambo (25) izvo zvakaita kuti akuvare zvakaipisisa.
Mutevedzeri wemutauriri wemapurisa kudunhu reManicaland, Assistant Inspector Luxon Chananda, vanotsinhira nyaya iyi.
“Mlambo aiva pabhawa rekwaMatake apo mudzimai wake Lucia akasvika ndokutanga kunetsana nenyaya yemari. Lucia aipomera Mlambo kuti ari kupedzera mari yose kudoro.
“Mlambo akatanga kufamba achidzokera kumba kwake, Lucia achibva amutevere ndokumubatira paminda yeDeure Irrigation Scheme.
“Lucia anonzi akabva adonhedzera murume wake pasi, ndokumutorera bhodhoro redoro raaiva akabata, iro akamurova naro mumusoro kusvika ratsemuka. Mushure maizvozvo, Lucia anonzi akatora magirazi ainge atsemuka ndokubaya murume wake mudumbu kusvika abuda ura,” vanodaro Ast Insp Chananda.
Ndlovu anonzi akazotsvaga muchovha wekutakurisa murume wake kuti akwanise kuenda naye kuBirchenough Bridge Hospital kunorapwa.
Nyaya iyi yakazomhan’arwa kumapurisa zvikaita kuti Ndlovu asungwe.
Ast Insp Chananda vanokurudzira veruzhinji kuti vasaite mhirizhonga kana kurwisana nokuti zvinozovapinza muna taisireva.
Vakaitwa dititi nechaunga18 Sep, 2020
Akadzika murume chidhakwa demo10 Sep, 2020